I-china imicu eqoshiwe yabakhiqizi be-Thermoplastics nabaphakeli | I-Beihai Fiberglass
Kususelwa ku-ejenti yokuhlangana kwe-silane nokwakheka okukhethekile kosayizi, okuhambisana ne-PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP.
Ukusetshenziswa kabanzi kwezimoto, okokusebenza kwasekhaya, ama-valve, ukufakwa kwempompo, ukumelana nokugqwala kwamakhemikhali nezinto zokusebenza zezemidlalo.
Imicu eqoshiwe ye-Thermoplastic isuselwa kumenzeli we-silane coupling kanye nokwakheka okukhethekile kwe-sizing, ehambisana ne-PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP.
Ukuma kwe-E-Glass Okuqhekiwe kwe-thermoplastic kuyaziwa ngobuqotho obucwengekile, ukugeleza okuphezulu nokucutshungulwa kwempahla, ukuletha impahla enhle kakhulu yomshini nekhwalithi ephezulu yendawo kumkhiqizo wayo ophelile.
Umenzeli we-coupling osuselwa kuSilane oletha izakhiwo ezilinganiselwe kakhulu.
2.Special sizing formaulation eletha ukubopha okuhle phakathi kwemicu eqoshiwe ne-matrix resin
Ubuqotho 3.Excellent futhi flowability ezomile, isikhunta okuhle ikhono kanye ukuhlakazeka
Izici ze-4.Excellent mechanical kanye nesimo semikhiqizo ehlanganisiwe
Izinqubo Zokukhipha Nokujova
Ukuqiniswa (imicu eqoshiwe yengilazi) kanye ne-resin ye-thermoplastic ixubene ku-extruder. Ngemuva kokupholisa, ama-ther aqotshelwa kuma-pellets aqinisiwe we-thermoplatic. Ama-pellets afakwa emshinini wokubumba ojova ukwakha izingxenye eziqediwe.
Imicu e-E-Glass Eqhekiwe yeThermoplastics isetshenziswa kakhulu ezinqubeni zomjovo nokucindezela ukubumba futhi ukusetshenziswa kwayo okujwayelekile kokuphela kufaka phakathi okwezimoto, okokusebenza kwasekhaya, ama-valve, ukufakwa kwempompo, ukumelana nokugqwala kwamakhemikhali nezinto zokusebenza zezemidlalo.
Ukumelana ne-Hydrolysis, ukukhanya okuhle kakhulu
Ukuhamba kahle okuhle
Intambo Ububanzi, μm
Intambo Ububanzi (%)
Langaphambilini Imicu Emanzi Eqoshiwe
Imicu eqoshiwe ye-Pa
Imicu eqoshiwe ye-Pa6
Imicu eqoshiwe ye-Pp